ငတ်ပြီပေါ့ – Grab Love Story
ကျနော်ခွင့်တင်တာမရဘူးလို.မန်နေဂျာကောင်ကဇွတ်ငြင်းဆန်နေတော့ စိတ်ကတော်တော်လေးတိုစပြုလာတယ်။ အေပရယ်လဆိုနှစ်တိုင်း ကျနော်ခွင့်တစ်လယူပီးပြန်နေကြဗျ။ အရင်မန်နေဂျာကုလားဖြူမ လက်ထက်ကအေးဆေးပဲ။ ၂ခါပြောစရာမလိုဘူး။ ခုတရုတ်ကောင်ကတော်တော်လက်ပေါက်ကတ်၊ပြော ရဆိုရခက်နေတယ်။ သောက်ပုံမလာတဲ့ မီးကျိုးမောင်းပျက် ကုလားဖြူစကားထစ်အထစ်အနဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ လုံးဝခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပီးအော်ကြီးဟစ်ကျယ်လုပ်နေတယ်လေ။ တခြားရုံးသူရုံးသားတွေ ၀ိုင်းကြည့်နေတော့ ပိုပီးခံရခက်လာပီ။ ပိုဆိုးတာက ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့အထဲမှာ ကျနော့်ခခလေး၂ယောက်ပါနေတော့ နောက်ဆုတ်လို.မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသေချာနေပီလေ။ ဒီနိုင်ငံကချယ်နယ်တော် တော်များများကိုထုတ်လွင့်ပေးနေတဲ့ ရုပ်သံဌာနတစ်ခုမှာ ကျနော်အလုပ်လုပ်နေတာ၎-၅နှစ်လောက်ရှိပီဗျ။ မြေအောက်ကို၅ထပ်လောက်တူးပီးဆောက်ထားတဲ့ စတူဒီယိုတွေမှာ ဆက်တင်တွေဆင်ပီး ရိုက်ကူးရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့။
အလုပ် လုပ်နေတယ်လို.မထင်ရပဲ.. ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်လေးနေလာတာကြာလာပီ။ ခုအသစ်ရောက်လာတဲ့မန်နေဂျာကောင်နဲ.အဆင်မပြေ လာတော့ စိတ်ကကုန်စပြုလာပီဗျာ။ အဆက်မပြတ် ပူညံပူညံလုပ်နေတဲ့ တရုတ်ကောင်ကိုလက်ဝါးကာပြလိုက်ရင်း ဘောင်းဘီနောက်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဆွဲထုတ်၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံ တင်ကဒ်ပြားကို သူ.ရှေ.ကစားပွဲပေါ်ပစ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ လည်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ ၀န်ထမ်းကဒ်ပြားကိုပါ ပစ်ပေးလိုက်ရင်း ငါထွက်တယ်ကွာလို့အပြတ်ပြောလိုက်တယ်။ တစ်ခုခုဆက်ပြောဖို့ ပြင်နေတဲ့ သူ့မျက်နာရှေ.မှာ လက်ညှိုးလေးရမ်းပြပီး အောင်နိုင်သူအပြုံးနဲ့ရုံးခန်းထဲကထွက်လာခဲ့ပီး တစ်ဖက်ခန်းမှာရှိတဲ့ စားသောက်ခန်းထဲမှာ သတင်းစာတစ်စောင်ကောက်ဖတ်ပီး အအေး ထိုင်သောက်နေလိုက်တယ်။ နာရီဝက်လောက်နေတော့နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ရောက်လာလို့ ထမင်းစားခန်းထဲ လူတွေအများကြီးဝေါကနဲဝင်ချလာတယ်။ အားလုံးတစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ကျနော့်ကိုစကားဝိုင်းပြောနေကြတာ ထမင်းစားဖို့တောင်မေ့နေကြသလားမှတ်ရ။ တချို.ကနှမြောသလိုတချို.ကတော့ ဟိုကောင့်ကိုကျနော်သောက်ကြောတင်း တင်းပြောခဲ့တာကိုသဘောတွေကျနေကြတယ်လေ။ တူညီတာတစ်ခုကတော့ အားလုံးကစိတ်မကောင်းကြပါဘူး။ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေ.. အသားဝါ..အသားညို..အသားဖြူအားလုံးကတချိန်လုံး ပြုံးချိုပီး နောက်ပြောင်ပျော်ရွင်နေတတ်တဲ့ ကျနော်အလုပ်ထွက်ပီးပြန်မယ်ဆိုတော့ ၀မ်းနည်းနေကြတာပေါ့။ မပြန်ခင် ဘာဘီကျူးပါတီကမ်းခြေတစ်ခုခုမှာလုပ်ပီး သောက်ဖို့တိုင်ပင်နေကြသေး တယ်။ သိမ်းစရာရှိတာလေးတွေကိုသိမ်းဖို့ အားလုံးကိုနွုတ်ဆက်ပီး အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။
ရုံးခန်းထဲက ကျနော့်စားပွဲမှာ ပစ္စည်းလေးနည်းနည်းပါးပါးသိမ်းနေတုံး ခုနကလူအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ကောင်မလေး၂ယောက်ကျနော့်စားပွဲနားကပ်လာလို့ ဟိုင်း..အချစ်ကလေးတွေ.. လို့ပြောင်ချော်ချော် နွုတ်ဆက်လိုက်တော့ ၂ယောက်လုံးက မျက်နာသေလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေတာသတိထား မိတယ်။ အဲ့ဒါကျနော့်ခခလေးတွေဗျ။ မေရီလို့ခေါ်တဲ့တစ်ယောက်ရယ်၊ ကြာပန်းဖြူ လို့ခေါ်တဲ့တစ်ယောက်ရယ်.. ရုံးကစာရင်းအင်းတွေကိုင်တဲ့ တရုတ်မလေးတွေပေါ့။ သူတို့မျက်နာလေးတွေ ကြည့်ပီး ကျနော်ဆွေးသလိုလိုတောင်ဖြစ်လာတယ်။ ခခလေးတွေလို့ကျနော်ပြောလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲသိချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်မလား။ အတိုချုံးပြောရရင်… ဒီရုံးမှာကျနော်ရောက်ရောက်ချင်းခင်မင်ခဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့။ မေရီဆိုတာက ပိန်ပိန်ပါးပါးဖြူဆွတ်ဆွတ်ကောင်မလေး၊အသက်၂၃-၂၄ လောက်တော့ရှိပီ.. စကားပြောရင်ဗလစ်ဗလစ်နဲ့ခပ်သွက်သွက်ကလေး.. ဘော်ဒီဝိတ်တက်မှာစိုးလို့ ရေလုံပြုတ်ပဲအမြဲ စားပီးဒုက္ခစရိယာကျင့်နေတဲ့ ဆံပင်နက်နက်ခါးလည်လောက်ရှိတဲ့ချစ်စရာ ကောင်မလေးပါ။ ကြာပန်းဖြူလို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ အိုမီဂါဆံပင်ပုံနဲ့ ခပ်ထွားထွားအသက်၂၅-၂၆လောက်ရှိ ပီဗျ။ ခါးလေးကသေးသေးကျင်ကျင်လေး..ဒါပေမယ့်ရင်ကတအားကြီးထွားလွန်းတာရယ်၊တင်ကကော့ကော့ကြီးဖြစ်လွန်းတာရယ်ကြောင့် အမြဲအစခံနေရတဲ့ ခပ်ချောချောတောင့်တောင့်အမျိုး သမီးတစ်ယောက်ပေါ့။
ဒီရုပ်သံဝင်းထဲက စတူဒီယိုတွေဆက်တင်တွေကြားထဲ အလုပ်အတူတူလုပ်ရင်း တော်တော်လေးခင်မင်ခဲ့ရတဲ့သူငယ်ချင်းလေးတွေပေါ့။ စီးကရက်တစ်လိပ်ကိုသူဖွာကိုယ် ဖွာ၊ အအေးဗူးတစ်ဗူးကိုတစ်ယောက်တစ်လှည့်မော့တဲ့အထိရင်းနှီးခဲ့ရတာလေ။ ခခတွေဘာတွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဗျာ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီ၂ကောင်ချောက်ကျတာ မနှစ်ကပေါ့။ ကျနော့်ကိုရုံးခန်းထဲ က လျှပ်စစ်ပန်နယ်လ်တစ်ခုပြင်ခိုင်းလို့သွားဝင်ပြင်နေတာ နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်တဲ့အထိအဆင်မပြေဘူးဖြစ်လို့ ထမင်းမစားသေးပဲထိုင်ပြင်နေတာဗျ။ အဲ့ဒီမှာ မမ၂ယောက်ကအသာလေး ရုံးခန်းထဲဝင်လာပီး ဘယ်သူမှမရှိဘူးအထင်နဲ့ ကွန်ပြူတာလေးခိုးဖွင့်ပီး အောကားတွေဇိမ်နဲ့ကြည့်နေတာလေ။ ဒင်းတို့၂ယောက်က ၁၁း၄၅လောက်ဆို ထမင်းသွားစား၊ရုံးကလူတွေထမင်းစား ထွက်ပီဆိုအမြန်ပြန်လာပီး အဲ့လိုနှာထနေကြတဲ့ဟီးဟီး။ ကြည့်ရင်းနဲ့လည်း ပါးစပ်ကအငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူး.. ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေဆက်တိုက်ပြောနေသေးတာ။ သူတို့အနောက်မှာတိုင်ကို ကွယ်ပီး အလုပ်များနေတဲ့ကျနော်ကတော့ ရယ်ချင်လိုက်တာဗျာ။ နည်းနည်းကြာလာတော့မှ အဟမ်းဟမ်း! ဆိုပီးအကွယ်ကနေဘွားကနဲထွက်လာတော့ မျက်နာတွေနီရဲပီး ခြေတုန်လက်တုန်နဲ့ကျနော့်ကိုဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေရော။
ငါ့ကိုဘီယာအ၀မတိုက်လို့ကတော့ နင်တို့ဘ၀ပျက်ပီသာမှတ်.. အကုန်လျှောက်ပြောပစ်မယ်ဆိုပီးခြောက်လိုက်တာ ၂ယောက်စလုံးက မလုပ်ပါနဲ့ဖိုးသက်ရာ ဘာညာနဲ့ဟားဟား။ ကျနော်အကျင့် မပုတ်တတ်ပါဘူးဗျာ။ သူတို့ကိုနောက်လိုက်တာပါ။ နောက်ပိုင်းကြတော့ သူတို့၂ယောက်လုံးကျနော့်ကိုဆက်ဆံတာ မူပျက်လာတယ်။ အရင်ကလည်း စတိုခန်းသော့ကိုင်တဲ့ သူတို့၂ယောက်နဲ့ ပစ္စည်းသွားထုတ်တိုင်းကြုံရင်ကြုံသလိုထိကပါးရိကပါးပြောနေကြပါ။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပီးတော့ လစ်ရင်လစ်သလို ခြေဆော့လက်ဆော့လေးတွေ(အတို့အမြုပ်လေးတွေ) ပါပါလာ တယ်ဗျ။(ကျနော်အရင်သွားစတာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ) ဂေါက်ကွင်းထဲမှာမောင်းတဲ့ ကားအဖြူလေးတွေနဲ့သွားလာရတဲ့အထိ ကျယ်လွန်းလှတဲ့ဒီဝန်းကြီးထဲမှာ မှောင်ကြောင်ကြောင်စတူဒီယိုခန်း တွေအများကြီး.. ဆိုတော့တိုတိုပြောရရင် ငြှိကုန်တာပါပဲ။ ဟိုလိုသမီးရည်းစားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ ၂ယောက်လုံးနဲ့ဖီးလ်လာရင်လာသလို ဖြစ်ကုန်ရောဗျာ။ တမင်ကို တိုင်ပင်ပီးကျနော့်ကိုကြံနေ တဲ့အတိုင်းပဲဗျ။ သူတို့မျက်နာတွေကိုကြည့်ရင် စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့၊ကျနော်သိတယ်ဗျ.. တစ်ယောက်နဲ့လုပ်တာနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြန်ပြောပြနေတယ်နေမှာ။ ဖြစ်ပုံပျက်ပုံတွေကိုကျနော်သေသေ ချာချာနောက်ပိုင်းမှပြောပြမယ်ဗျာ။
လောလောဆယ်ပြောလက်စ ဆက်ပြောရအောင်လား။ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကျနော့်မိတ်ဆွေကောင်မလေး၂ယောက်ကို ချော့မော့ရင်းပစ္စည်းတွေသိမ်းနေလိုက်တယ်။ ဖိုးသက်! ငါတို့၂ယောက်နင်မရှိရင်နေရခက်ပီဟာတဲ့.. မျက်နာသိပ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မေရီကပြောတာကို၊ကြာပန်းဖြူက ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ထောက်ခံနေတယ်။ တူတူပါပဲသူငယ်ချင်းတို့ရာ.. … ငါလည်းမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်တော့မှာသေချာတယ်…သွားရခါနီးဆိုတော့နင်တို့၂ယောက်ကိုမခွဲနိုင်လို့ ငါ့မျက်နာကိုကြည့် ၀မ်းနည်းနေတာဆိုပီး ပြီတီတီလုပ်ပြလိုက်တော့ ကျနော့်ကျောကို တဗုန်းဗုန်းလက်သီးဆုတ်ကလေးတွေနဲ့ဝိုင်းထုကြတာ အောင့်သွားတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျနော်ပျော်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုနွုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ ချစ်သူတွေအများကြီးနဲ့မုန်းသူတချို.ကိုကျနော်ထားရစ်ခဲ့ရပီ။ အေပရယ်လတိုင်းကျနော်သွားနေကြနေရာလေးကိုသွားဖို.အတွက် ၀င်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကထွက်ခွါလာခဲ့တယ်။ လေယဉ်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပေါ့ပါးသွားတယ်။ တခါတလေကြတော့ လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်ရတာမျိုးက လူ့ဘ၀ကြီးကိုပိုလေးနက်စေသလိုပဲလို.တွေးရင်း ပြုံးရင်း လေယဉ်မယ်ချောချောလေးကိုလက်ပြပီး ကျနော်စကားလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ ကျနော့်ကိုဝိုင်အနီတစ်ခွက်လောက်ယူလာပေးလို့ရမလားခင်ဗျ!! ဒီနေ့တော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဗျ။
ရိုက်ကူးရေး၂ခုရှိတယ်လေ။ ပိုဆိုးတာက စတူဒီယိုအမှတ် ၃၊၅၊ရ တွေမှာနက်ဖန်ဇတ်လမ်း၃ခုဆက်တိုက်ရိုက်ဖို့ဝင်လာမှာဆိုတော့ အကုန်ရွုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲဗျာ။ လောလောဆယ် တရုတ်တန်းမှ လင်မယား၂ယောက် ဆိုတဲ့ဇတ်လမ်းတွဲ ကို အပြင်ကအတိုင်းဆက်တင်ဆင်ပီးရိုက်နေကြပီဆိုတော့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ကလူ၂ယောက်ပေးထားလိုက်ပီး ပစ်ထားလိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့နက်ဖန် ရိုက်မဲ့ဟာတွေအတွက် Drawing ကားချပ်တွေဝေပီး indoor ရိုက်မှာဆိုတော့ အလင်းအမှောင်အတွက်စတူဒီယို၃ခုစလုံး(၂ခုက မြေပေါ်မှာ ၁ခုကမြေအောက် ၅ထပ်မှာ) ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ ကျနော်ဗျာ များနေတာပေါ့။ ဒီကြားထဲ Drawing ကားချပ်တချို. မှားပေးလိုက်မိတော့ Lighting: စမ်းတဲ့အခါသောက်တလွဲတွေဖြစ်ကုန်လို့ စတူဒီယို ၃ ကဟာနဲ့ ၅ ကဟာဟိုဖက်ဒီဖက်လွဲတော့ ပြဿနာတွေ တက်ရွုပ်ကုန်ရောလေ။ ဆက်တင်ဆင်တဲ့အဖွဲ.ကလည်းကလော်ဆဲ၊ ကျနော်တို့မီးဆရာအချင်းချင်းလည်းဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ပေါက်ကွဲ၊ စတိုခန်းလုပ်ထားတဲ့ဂိုထောင်အေ၀းကြီးဆီ ကားသေးသေး လေးနဲ့မောင်းသွားပီး မီးစလောင်းအမျိုးမျိုးထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေတော့ စတိုစာရင်းကိုင်တဲ့ ကြာပန်းဖြူဆိုတဲ့ တရုတ်မလေးကလည်း စိတ်တိုလို့မျက်နာက စူပုပ်နေပီ။ နောက်ဆုံးမိုးချုပ်ခါနီး မှအားလုံး အိုကေသွားတယ်။ နေ့လည်စာတောင်မစားလိုက်ရမှန်းခုမှသတိရလိုက်တယ်။ ခုနကလူသတ်တော့မလိုမျက်နာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ လူအယောက်၃၀လောက်က ခုတော့ပြုံးရွင် နောက်ပြောင်လို့ တဟားဟားနဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းပီးပြန်ဖို့ပြင်နေကြပီ။ ကျနော်တို့အလုပ်ကဒီလိုပါပဲဗျာ..ပျာယာခတ်ချင်ဇွတ်ခတ်ပီးခုလိုပီးသွားပီဆိုတာနဲ့ နက်ဖန်ရိုက်ကူးရေးဝင်ပီဆိုတာနဲ့ ဝေလေလေ ဖြစ်သွားရော သူတို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်ဆို ဘာအလုပ်မှကိုမရှိတာ၂-၃ရက်တော့ဆက်တင်တွေပြန်မဖြုတ်မချင်း အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရနေတာကိုး။ နေ၀င်ရီတရောမှာအားလုံးပြန်ကုန်ပီ။ ကျနော်ကတော့ စတိုခန်းဖက်သွားရဦးမယ်။ ဂေါက်ကွင်းမောင်းတဲ့ကားအဖြူလေးရဲ.ထွေလာနောက်တွဲပေါ်ကို ဗူးသီးခရမ်းသီးနဲ့တူတဲ့မှားပီးထုတ်လာတဲ့မီးစလောင်းတွေတင်ပီး ဒီရုပ်သံဝန်းကြီး အနောက်ဖက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့ ဂိုထောင်တွေဖက်ကိုမောင်းလာခဲ့တယ်။
ပစ္စည်းလက်ခံဖို့ထိုင်စောင့်နေတဲ့ ကြာပန်းဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးတော့ မနက်ကထဲကငုတ်တုတ်လေးဒီစတိုခန်းမှာစောင့်နေ ရတော့ စိတ်တော်တော်တိုနေလောက်ပီ။ ကားလေးကိုရပ်ပီး စတိုထဲပစ္စည်းသွင်းနေတော့ အ၀င်ဝမှာစာရင်းထိုင်မှတ်နေတဲ့ ကျနော့်ဘော်ဒါ ကြာပန်းလေးက နွုတ်ခမ်းလေးစူတူတူဖြစ်နေပီးခပ် တည်တည်လေးဖြစ်နေတာဗျ။ အားလုံးပီးသွားတော့ သူစာရင်းမှတ်နေတဲ့ ခုံနားသွားရပ်ပီး အချစ်ကလေးရေ! လို့ နောက်တောက်တောက်ခေါ်လိုက်တော့ ချီးအချစ်ကလေးလား! လို့ပြန်ကလော် ဆဲလာတယ်။ အပြန်နောက်ကျလို့ဒေါသထွက်နေတာနေမှာဗျ။ ကွန်ပြူတာပိတ်နေတဲ့သူ့ကိုစောင့်ရင်း အပြင်ကအအေးရောင်းတဲ့စက်မှာ အကြွေစေ့နဲ့အအေး၂ဗူးဝယ်လိုက်တယ်။ စတိုပိတ်ပီးအ ပြင်ထွက်လာတဲ့ ကြာပန်းဖြူ ရဲ.လက်ထဲကိုအအေးတစ်ဗူးထိုးပေးပီး ပင်ပန်းသွားပီငါ့သူငယ်ချင်းလေးဆိုပီး ချော့လိုက်တော့ နည်းနည်းပြုံးလာတယ်။ ကားလေးနောက်မှာတွဲထားတဲ့ထွေလာကို ဖြုတ်ချလိုက်ပီး ကြာပန်းနဲ့ကျနော်တက်ထိုင်ရင်းဖြေးဖြေးလေးမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ ပင်မအဆောက်အအုံကြီးဖက်ကို မောင်းလာရင်းစကားတွေဖောင်ဖွဲ.လာကြတာပေါ့လေ။ လမ်းမှာမီးမောင်း တွေဆင်ပီး ညဖက်လေ့ကျင့်ရေးဆင်းနေတဲ့ အဖွဲ.တစ်ဖွဲ့တွေ့လို့ ကားခဏရပ်ပီး အအေးဗူးတွေမော့ရင်း ကျနော်တို့၂ယောက်ထိုင်ငေးနေလိုက်သေးတယ်။ ကာယလေ့ကျင့်တဲ့ ဆရာတွေက မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုကျင့်ပေးနေတာဗျ။ ရံပုံငွေရှာတဲ့အနေနဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေနောက်လကုန် မြို.လည်ခေါင်မှာ စတန့်စွန့်စားမွုတွေလုပ်ပြမယ်လို့ကြေငြာထားတာလေ။
အဲ့ဒါခု အပြင်းအထန်ကျင့်နေကြတာနေမှာ။ ရေကူးဝတ်စုံလေးဝတ်ထားပီး ဟိုဖက်ဒီဖက်အပြေးကျင့်နေတဲ့ မင်းသမီးမိုက်မိုက်လေးက ကျနော်နဲ့ကြာပန်းဖြူကို တွေ့တော့ လျှာထုတ်ပြလာတယ်။ လစ်ရင်လစ်သလိုကျနော်တို့ဆီက စီးကရက်တောင်းသောက်တတ်တဲ့ မင်းသမီးတော့ တိုင်ပတ်နေပီဗျ။ အသားကုန်အမောင်းခံနေရတာ။ ထရိန်နာက အသားကုန်ဟိုဖက်ဒီဖက်ပြေးခိုင်းနေတော့ မင်းသမီးလေးရဲ.ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အသားစိုင်တွေက တုန်ခါနေတဲ့အပြင်ဘီကီနီလေးနဲ့မီးမောင်းတွေအောက်မှာဆိုတော့ ကြည့်ရတာ ဂလုဂလုပေါ့။ ကျနော်တော့ အအေးလေးမော့လိုက်၊စီးကရက် လေးဖွာလိုက် ငေးလိုက်နဲ့သာယာနေတာလေဟိ။ ကျနော့်ပုခုံးကိုမှီပီးရပ်နေတဲ့ ကြာပန်းဖြူက ဖိုးသက်ငါ့ကိုစီးကရက်တစ်လိပ်လောက်လို့ပြောမှသတိဝင်လာ တယ်။ စီးကရက်ဖွာရင်းကျနော့်သူငယ်ချင်းမလေးက စကားစပြောတယ်… ဖိုးသက်.. နင့်မျက်လုံးကြီးကလည်း မီးတွေတောက်နေသလိုပဲခစ်ခစ်.. အာ! ကြာပန်း.. သောက်ကောင်မလေး.. အမလေး.. နင်မကြိုက်ဘူးလား..ပိန်ပါးပါးလေး… ရင်ကလေးကလည်းထွားပေမယ့်အနေတော်လေး..ဟိဟိ ကြိုက်ပါဝူးဟာ…ငါကြိုက်တာကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟ.. ဘယ်လိုမျိုးလဲပြောစမ်း.. ငါစိတ်ဝင်စားလို့ဟိ ဒီမင်းသမီးက တင်ပါးမရှိဘူးဟ… ငါ့အမြင်က ဖင်မရှိတော့အားမရဘူး..တောင့်တောင့်ထွားထွားမှစိတ်ယားစရာကောင်းတာလေ.. ….. …… …… ……… …….. အဲ့ဒီလိုလျှောက်ပြောပီးမှအားနာသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ..တောင့်တောင့်ထွားထွားဆိုတာသူ့ကိုပြောသလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ ကျနော်ပြောသလိုပဲဒီကောင်မလေးက ခါးလေးကသေး သေးကျင်ကျင်လေး၊ တစ်ကိုယ်လုံးအဆီပိုလုံးဝမရှိပေမယ့် နို့ကြီးတွေက ဆူဖြိုးဖြိုး၊ ဖင်ကလည်းအနောက်ကိုအယ်ထွက်နေတော့ တစ်ရုံးလုံးက၀ိုင်းစနေကြတယ်။
ရုပ်ကလေးကမျက်နာဝိုင်းဝိုင်း လေး နဲ့ပြောင်တင်းတင်းလေးချစ်စရာကောင်းပေမယ့် ခုနကပြောသလို အထက်အောက်ပစ္စည်းတွေကကြီးလွန်းတော့ လူတွေကမျက်နာအရင်မကြည့်ပဲ အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တာခံနေရတော့ရှက် ရှာမှာပေါ့လေ။ ခုမရည်ရွယ်ပဲကျနော်ပြောလိုက်တာ သူ့ကိုပြောသလိုဖြစ်သွားလို့အားနာသွားတယ်။ ခါတိုင်းလည်း သားပြောမယားပြောတွေနောက်ပြောင်နေကြပါ.. ဥပမာ..ဖိုးသက်နင်တစ်ရက် ကိုမာစတာဘိတ်ဘယ်နှစ်ခါလုပ်လဲဟီးဟီး ဘာညာအဲ့လိုတွေပြောနေကြပေါ့..ဒါပေမယ့်ခုဟာက လူပုံအလယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ တစ်ဖွဲ.လုံး၂ယောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ဆိုတော့စိတ်ကတစ် မျိုးဖြစ်သွားပီ။ နင်ကငါ့လိုဘော်ဒီမျိုးကိုသဘောကျတာမျိုးလား… ခုနကလိုရယ်သံမစွက်တော့တဲ့ လေသံတိုးတိုးနဲ့ ကျနော့်ပုခုံးပေါ်သူ့မေးစိလေးတင်ပီး နားရွက်နားကပ်ပြောလာတော့ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာဗလောင်ဆူစပြုလာတယ်။ လုံးဝသူ့မျက်နာကိုစောင်း ငဲ့မကြည့်ပဲ.. ဟားဟား… ဟုတ်ပါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးမှအိပ်ယာပေါ်မှာ ဇိမ်ကျတာလေ..ကြာပန်းဖြူလေးရ.. မိန်းမပီသတယ်လို့ခေါ်တယ်..နင်ကမှတကယ်လှတာ.. နောက်သလိုပြောင်သလိုလုပ်ပီးလျှောက်သာပြောနေရပေမယ့် ကျနော်တော့ အသားချင်းထိထားရင်း သွေးတွေတဖျင်းဖျင်းဖြစ်လာပီ။ အားပေးတာကျေးဇူးသူငယ်ချင်းလို့ တိုးတိုးလေးပြောပီး ဘေးတိုက်အနေထားနဲ့ကျနော့်ပုခုံးကိုတင်းတင်းဖက်လာတော့ သူ့နို့ကြီးနဲ့ကျနော့်လက်မောင်းထိအိကနဲအိကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ဖူးးးးးး!! ဒုက္ခသစ္စာ။ မကောင်းပါဘူးလေဆိုပီး..ကြာပန်းငါတို့လစ် စို့နောက်ကျနေပီလို့ပြောရင်း ကားလက်ကိုင်နောက်မှာတက်ထိုင်ရင်း သော့ဖွင့်လိုက်တယ်။ နီယွန်မီးရောင်အောက်မှာ အဆီပြန်နေတဲ့မျက်နာလက်လက်ကလေးနဲ့သူမကျနော့်ကိုတစ်ချက်စိုက် ကြည့်လာတယ်။ မျက်လုံးတွေထဲမှာ မီးတောက်တွေကျနော်တွေ.နေသလိုလိုပဲ။
သက်ပြင်းလေးခိုးချပီး ကျနော့်ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့ ကျနော်လည်းမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ ရုံးခန်းဘေး မှာကားလေးကိုရပ်ပီး ကျနော်အ၀တ်သွားလဲလိုက်တယ်။ ကျောပိုးအိတ်ကလေးလွယ်ပီး ကားပါကင်မှာရပ်ထားတဲ့ကျနော့်ဆိုင်ကယ်လေးဆီလျှောက်လာတော့ အနောက်ကလှမ်းအော်သံကြား တယ်။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကြာပန်းဖြူ လက်ပြနေတာတွေ့တော့ပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ စတူဒီယို၅ မှာငါစာရွက်တွေကျန်ထားသလားလို့သွားကြည့်ချင်တာ တစ်ယောက်ထဲသရဲ ကြောက်လို့လိုက်ကူပေးဦး.. ဆိုပီးကျနော့်မျက်နာကိုမကြည့်ပဲပြောလာတယ်။ စတူဒီယို၅ ဆိုတာမြေအောက်၅ထပ်မှာရှိတာဗျ။ အရင်ကတရုတ်သင်းချိုင်းနေရာကိုတူးထားတာဆိုတော့သရဲတအားခြောက်တယ်လို့နာမည်ကြီး ဆိုတော့တစ်ယောက်ထဲဘယ်သူမှမသွားရဲဘူး။ ခုချိန်ဆိုအဲ့ဒီစတူဒီယိုထဲမှာ လူသူရှင်းပီးအေးစိမ့်နေတော့ လမ်းလျှောက်ရင်တော့ကိုယ့်ခြေသံကိုယ်ပြန်ကြားရတာခြောက်ခြားစရာလေ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်မလေးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ရိပ်မိနေတဲ့ကျနော်တော့ တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိနေတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ခုနကသွေးအေးသလိုဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကပြန်ကြွတက်လာပြန် ပီ။ မထူးတော့ဘူးမီးစင်ကြည့်ကတာပေါ့ဆိုပီး လာသွားမယ်လို့ခေါ်ရင်း မြေအောက်ထပ်ဆင်းတဲ့ဓါတ်လှေကားထဲ၂ယောက်သားဝင်လိုက်တယ်။ ဓါတ်လှေကားထဲရောက်တော့ ခလုတ်နှိပ်နေတဲ့ သူ့လက်ချောင်းဖြူဖြူလေးတွေတုန်ခါနေတာ ကျနော်မြင်နေရတယ်။ ခါတိုင်းဆိုစပ်ဖြဲဖြဲဖြစ်နေတတ်တဲ့သူ့မျက်နာက ခုကျနော့်ကိုမကြည့်ရဲပဲမျက်လွာလေးချထားတယ်။ အနက်ရောင်စပို့ရှပ်လေး အောက်က ရင်အုံမောက်မောက်လေးက နှိမ့်တုန်မြင့်တုန်နဲ့စိတ်လွုပ်ရှားနေမှန်းသိသာနေပီ။ အောက်ထပ်ကိုဆင်းနေတဲ့ ဓါတ်လှေခါးထဲမှာ သူ့အသက်ပြင်းပြင်းရှူသံခပ်ပြင်းပြင်းက လွမ်းမိုးနေ တော့တယ်။ တင်းတောင်!! ဆိုတဲ့အသံနဲ့ဓါတ်လှေကားတံခါးပွင့်ပီး စတူဒီယို၅ အထပ်မှာရပ်သွားတော့ ၂ယောက်လုံးတုန်သွားတယ်။ ခုမှသတိဝင်လာပီး ၂ယောက်စလုံးတစ်ယောက်မျက်နာတစ်ယောက်လှမ်းကြည့်ရင်းရှက်ပြုံးလေးတွေ မလုံမလဲပြုံးလို့ပေါ့။ စတူဒီယို၅ ရဲ.ဖွဲ.စည်းတည်ဆောက်ပုံကဒီလိုဗျ။ တကယ်တမ်း လုပ်တဲ့ရိုက်ကူးရေးက စင်တင်ပြဇတ် ဒါမှမဟုတ် ဇတ်လမ်းတို၊ မြူးဇစ်အစရှိသဖြင့်ကို အနိမ့်ဆုံးအပိုင်းက ကွက်လပ်မှာလုပ်တာမျိုးပေါ့။ လောလောဆယ်နက်ဖန်ရိုက်မယ့် ဟာသဇတ်လမ်းတိုလေးအတွက် အိမ်တစ်အိမ်ရဲ.ဧည့်ခန်း ပုံစံဆက်တင်တွေဆင်ထားတယ်။
လိုက်ဖ် လွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာကြည့်မယ့် ပိရိတ်သတ်တွေ ထိုင်ဖို့ခုံတွေက ပစောက် ပုံစံအတန်း လိုက် အပေါ်ကိုမြင့်တက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုး။ (RC2 မှာကျောင်းတက်ဖူးတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီစာသင်ခန်းတွေလိုပုံစံမျိုး) မြေအောက်မှာဆောက်ထားတော့ အေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေတယ်။ ဓာတ်လှေကားထဲက ထွက်တာနဲ့ မှောင်နေလို့လားမသိဘူး ကျနော့်သူငယ်ချင်းမလေးက ကျနော့်လက်မောင်းကိုဆတ်ကနဲဖမ်း ကိုင်လာတယ်။ ဒီအချိန်မပြောနဲ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင် တောင်မှတစ်ယောက်ထဲ စတူဒီယို၅ ကိုဘယ်သူမှမလာရဲဘူးဗျ။ ကျနော်ပြောသလို အောက်ဆုံးက ကွက်လပ်ကျယ်ကျယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်ပတ် လည်မှာ လွိုဏ်ခေါင်းတွေလို လျှောက်လမ်းတွေ ၄-၅ခုနဲ့ဆက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းသိမ်းတဲ့စတိုခန်းတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဗျ။ ဂရင်းပီယာနိုကြီးတွေ အလုံး၂၀လောက်၊ ဂစ်တာတွေအလက်၎-၅၀၊ အဲ့လိုတူရိယာတွေထားတဲ့အခန်း၊ လိုက်ကာစတွေအိမ်တစ်အိမ်ရဲ.အသုံးဆောင်ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေထားတဲ့အခန်းအစရှိသဖြင့်အခန်းတွေကို LED မီးလုံးလေးတွေပဲထွန်းထားတဲ့ လူတစ်ကိုယ် လျှောက်စာ လွိုဏ်ခေါင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ထားတာပေါ့။ ပြဿနာက သရဲတအားခြောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ဗျ။ တခါကဆိုတော်တော်ရွုပ်ထွေးတဲ့ ဆက်တင်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်နာအလိုကျဝိုင်းဆင် ကြရင်း မိုးချုပ်သွားလို့ မပြန်ပဲဒီထဲမှာ စုအိပ်ကြတာ မနက်လင်းအားကြီးမှာကွိုင်တက်ရောလေ။ ခုနကပြောတဲ့ လွိုဏ်ခေါင်းတွေထဲကနေ ကျနော့်တပည့်တရုတ်၎ကောင် အာခေါင်ခြစ်အော်ပီး ပြေးထွက်လာတာဗျ။ ဆောက်ထားတဲ့ ဇတ်စင်ပေါ် မှာကတ္တီပါစတွေခြုံပီး အိပ်နေတဲ့ ကျနော်နဲ့တခြားလူတွေဆီပြေးလာတာလေ။ ၄ကောင်စလုံးငိုလို့ယိုလို့ဗျာ။ နှပ်ချေးတွေ ကောမျက်ရည်တွေကော အကုန်ထွက်နေတာ။ သေချာချော့ပီးမေးတော့မှ သရဲခြောက်တာတဲ့ဗျ။ အေးတော့မွေးပွကော်ဇောတွေခင်းထားတဲ့ လွိုဏ်ခေါင်းအဆုံးက စတိုခန်းတစ်ခုထဲ လိုက်ကာစ လေးတွေခြုံပီးသွားအိပ်တာ ၄ယောက်လုံးအကန်ခံရတော့မှအားလုံးပြိုင်တူနိုးလာတယ်.. သရဲကအုပ်လိုက်ကြီးတဲ့ဆရာရေ.။ ထလို့မရအောင် ရင်ဘတ်တွေကိုတက်နင်းထားသေးတယ်တဲ့။ ပီးမှ.. မင်းတို့ကောင်တွေနောက်ထပ်ဒီထဲလာဝင်အိပ်ရင် မီးရှို.ပီးသတ်ပစ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်တယ်ဆိုလား။ အတင်းရုန်းပီးထပြေးလာကြတာတောင်မှနောက်ကနေ အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးက ဖင်ပိတ် ကန်၊ဇက်ပိုးအုပ် လိုက်လုပ်သေးတယ်တဲ့။ ဒါမျိုးဒီတစ်ခါပဲကြားဖူးသေးတယ်။ မယုံရအောင်လည်း ကိုယ့်ကောင်တွေက မကြည့်ရက်စရာဖြစ်နေတော့ ကျနော်နဲ့သတ္တိကောင်းတဲ့ဆက်တင်အဖွဲ့က လူ၃ယောက်သွားဝင်ကြည့်သေးတယ်..ဘာမှမတွေ့ပါဘူးဗျာ။
မနက်ရောက်တော့ အရေးပေါ်အစည်းဝေးတွေဘာတွေခေါ်ပီး ဒီကိစ္စကိုအပြင်မပေါက်ကြားပါစေနဲ့ဆိုပီး တာဝန်ရှိသူတွေကသတိ ပေးသေးတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ စတူဒီယို၅ ဆိုတဲ့အသံကြားရင် အလိုလိုအကုန်လန့်ကုန်တာဗျ။ ချွင်းချက်ကတော့ အီဖေကို မောင်ဖိုးသက်မပါဘူးလေ။ မယုံဘူးဆရာ.. လုံးဝကိုမယုံတာ.. တခါတလေ ဘာမှလုပ်စရာမရှိတဲ့ရက်တွေဆို ဒီအောက်ကိုဆင်းလာပီး ပီယာနိုထိုင်ဆော့၊ တန်ဖိုးကြီးလျှပ်စစ်ဂစ်တာတွေ ထိုင်တီးနဲ့ တစ်ယောက်ထဲနှောက်ယှက်မယ့်လူမရှိပဲ သာယာနေတာဗျ။ ခပ်မိုက်မိုက်ခပ်ရွတ်ရွတ်ကောင်မို့သရဲတွေလက်ရှောင်နေတာမှတ်တယ်ဟီး။ ဟာ… ဆောရီးဗျာ.. ကျနော်ဘာတွေလျှောက်ပြောနေမိပါလိမ့်… ဘယ်တွေရောက်ကုန်မှန်းမသိတော့ဘူး။ လူရှင်းပီး ဘယ်သူမှမလာရဲတဲ့ ဒီအောက်ထပ်ကို ကျနော့်သူငယ်ချင်းလေးက ဘာလို့ခေါ်လာတာလဲဆိုတာ ကျနော်ရိပ်မိပါတယ်လေ။ မိန်းမတစ်ယောက် ဘယ်လိုအမူအရာဆိုရင် ဘာသဘောလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ရတာမခက်ပါဘူး။ ခက်တာက တော်တော်ကြီးကို ရင်းနှီးချစ်ခင်ရတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဗျ။ စာရွက်လာရှာ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်က မခိုင်လုံမှန်းသူရောကျနော်ပါသိသားပဲ။ ဘယ်သူမှအနားမှာ မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့စိတ်က ၂ယောက်စလုံးကိုကြီးစိုးထားလို့ ဒီလိုနေရာကိုစိတ်တူကိုယ် တူ(ဖွင့်မပြောပဲ) ရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်.. ကျနော်အသားကုန်တွယ်ချင်နေပီဗျ။ ချစ်သူနဲ့ကွဲပီးတာ၂နှစ်လောက်ကြာလာပီ ဘယ်မိန်း မနဲ့မှမအိပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ ခုသွေးတွေပွက်ပွက်ကိုဆူဝေနေတယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတရုတ်မလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦး…. ၁၀၀% ပစ်မှားချင်စရာကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်လေး။
ပီးတော့အရင်ကထဲက လစ်ရင်လစ်သလို(သူကော မေရီပါ) ကျနော့်ရင်ဘတ်ကိုလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့စသလိုနောက်သလိုပွတ်လိုက်၊ ဟေးအချစ်ဆိုပီး အနောက်ကနေကျနော့်ကျောပြင်ကို နို့နဲ့မထိတထိဖိကပ်လိုက် လုပ်ပီး မီးမွေးထားခဲ့ဖူးတော့ ခုလိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၂ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ နေ့ရောက်လာတော့ လူ့သဘာဝအတိုင်း ပေါက်ကွဲဖောက်ပြန်ချင်လာတာဓမ္မတာပဲပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တွေဝေနေတာက အကယ်လို့များ သူ့ဖက်ကရိုးရိုးသားသားဖြစ်နေရင်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ဗျ။ အချင်းချင်းတွေအရှက်ကွဲကုန်မယ်ဆိုပီး ဘယ်ကဘယ်လိုစရမှန်းကိုမသိတာ။ ကျနော့်လက်ကိုဆွဲပီး စတိုခန်းတစ်ခုထဲကို လွိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲကနေ ဦးဆောင်ပီး ကြာပန်းဖြူဝင်သွားတယ်။ စတိုခန်းထဲရောက်သွားတော့ မီးခလုတ်တွေဖွင့်လိုက်တယ်။ ဆိုဖာခုံရှည်တွေ၊တစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာတွေထားတဲ့အခန်းဗျ။ အေးစိမ့်လွန်းတော့ချမ်းသလိုတောင်ဖြစ်လာတယ်။ အခန်းဝနားက… စာရွက်ဖိုင်တွေထားတဲ့ စင်ကလေးနားမှာ ကြာပန်းတစ်ယောက်ရပ်ပီး ဟိုရှာဒီရှာလုပ်နေတယ်။ ကျနော်ကတော့ သူ့ကိုစောင့်သလိုနဲ့ အခန်းထဲကဆိုဖာခုံရှည်တစ်ခုပေါ် ပက်လက်လှဲပီးအိပ်ရင်း သူ့ကိုလှမ်းအကဲခတ်နေလိုက်တယ်။ သူ့ခမျာလည်း မလုံမလဲနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက် ကျနော့်ဖက်ကိုမသိမသာစောင်းငဲ့ကြည့်ကြည့်လာတယ်။ ရင်တွေတုန်လိုက်တာဗျာ။ ဖြူဆွတ်ဆွတ်အသားအ ရည်လေးနဲ့စပို့ရှပ်အနက်ကလေးဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေး ကိုဘေးတိုက်မြင်နေရတဲ့ ကျနော်အာခေါင်တွေခြောက်လာပီ။ ဂျင်းပန်အဖြူကျပ်ကျပ်လေးဝတ်ထားတော့ စွင့်ကားတဲ့တင်ပါးကော့ ကော့ကြီးတွေက အားရစရာ။ လေးဖက်ထောက်ပီး အနောက်ကနေအားရပါးရ -ိုး လိုက်ရလို့ကတော့ ဆွေမျိုးမေ့သွားမှာပဲလို့ ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေးနေမိတယ်။
၅မိနစ်လောက်နေတော့…သူစိတ် မလုံတော့ဘူးနေမှာဗျ။ ဖိုင်တစ်ခုကိုစင်ပေါ်ကဆွဲချပီး.. တွေ့ပီဟ…လို့လှမ်းပြောလာတယ်။ ဖိုင်အ၀ါလေးကိုကိုင်ထားရင်း ခပ်တည်တည်ပဲ စတိုခန်းတံခါးမ ကြီးကိုဆွဲပိတ်ပီးကလန့်ထိုးလိုက်ပီ။ ပီးတော့မှတံခါးကို ကျောမှီရင်း ဖိုင်ကိုရင်ခွင်ထဲအပ်ထားပီး ကျနော့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ ၁စက္ကန့် … ၂စက္ကန့် …၃စက္ကန့် … ကြာပန်း.. နင်ဘာလုပ်နေတာလဲဟ!! အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့နဲ့ ကျနော်စကားစပြောလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ကျနော့်သူငယ်ချင်းမလေးက တစ်လှမ်းချင်း ကျနော့်အနားတိုးကပ်လာပီး လှဲအိပ်နေတဲ့ကျနော့်ဘေးမှာ တင်ပလွဲဝင်ထိုင်လာတယ်။ ဘာမှစကားမစသေးပဲ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ လက်ချောင်းပျော့ပျော့လေးတွေနဲ့ ကျနော့်မျက်နာကိုလှမ်းကိုင်ပီး ပါးပြင်တွေကိုခပ်ရွရွပွတ်လာတယ်။ သူငယ်ချင်း ငါ့ကိုအထင်မသေးနဲ့ဟာ .. ဆိုပီးရှက်ပြုံးလေးနဲ့တိုးတိုးပြောတော့ ကျနော်ကသူ့လက်ချောင်းတွေကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ပီး ဘာလို့သေးရမှာတုံးလို့အူကြောင်ကြောင်ပြန်မေးလိုက် မိသေးတယ်။ နင်..နင်…ငါ့ကိုယ်လုံးကိုကြိုက်တယ် သဘောကျတယ်ဆို.. ….. ……. …… …….. မေရီနဲ့ ငါလည်းနင့်ကိုကြည့်ပီး စိတ်ယားနေတာသိလား .. ….. ……. …… …….. ကျနော်ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ မုန်တိုင်းထန်နေတဲ့ ကျနော့်စိတ်ကိုလွတ်ပေးလိုက်မိပီဗျာ။ ခါးကျင်ကျင်လေးကိုဆတ်ကနဲထထိုင်ပီးဆွဲဖက်လိုက်တယ်။ မီးရောင်အောက်မှာ ရှက်ပြုံးလေးနဲ့နီမြန်း နေတဲ့ ကြာပန်းဖြူရဲ.မျက်နာလေးကို ကျနော့်မျက်နာ နားဆွဲကပ်ပီး တလွုပ်လွုပ်တရွရွနဲ့ဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ သူ့လေးကိုင်းလိုကွေးနေတဲ့ထူအမ်းအမ်း နွုတ်ခမ်းချိုလေးကို ဆွဲစုပ်ပေးလိုက်တယ်။ အွန်းးးးးး !! ဆိုပီး ညည်းလိုက်တဲ့သံရှည်ဆွဲသံလေးက ကျနော့်ကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းခရီးဆက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့ထင်မှတ်မှားသွားစေတယ်ဗျာ။ မွတ်သိပ်နေတဲ့ အနမ်းတွေဟာ ပြွတ်ကနဲပြွတ်ကနဲမြည်သံတွေထွက်လာတဲ့အထိ ပြင်းထန်ပေါက်ကွဲလွန်းခဲ့တယ်။ တိတ်ဆိတ်အေးစိမ့်လွန်းတဲ့ အလုံပိတ်စတိုခန်းလေးထဲမှာ ကိုယ်လုံးတောင့်တောင့်ကောင်မလေးနဲ့ကျနော် အသားကုန်လောင်မြှိုက်နေကြပါပီလေ။
ဒေါသကြီးနေတဲ့ ပင်ဒါဝက်ဝံပေါက်စလေးနဲ့တူ တဲ့ ကြာပန်းဖြူ… ကျနော့်နွုတ်ခမ်းကို မလွတ်တမ်းခဲထားရင်း..ကျနော့်ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကိုဆက်တိုက်ဖြုတ်နေပီဆိုတာ အထိအတွေ့အရသိလိုက်ရတယ်။ လိင်စိတ်အင်မတန်ထကြွနေပီဖြစ် တဲ့ကျနော်ကလည်း ဆိုဖာပေါ်လှဲနေရာက ထထိုင်လိုက်ပီး သူ့ဂျင်းပန်ဖြူလေးကို ခက်သွက်သွက်ချွတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ ဘေးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အသိက၂ယောက် လုံးမှာရှိနေတော့ အရှက်တရားလုံးဝကုန်ခန်းစေခဲ့ပီ။ ခု၂ယောက်လုံးမှာ အတွင်းခံလေးတွေကိုယ်စီဖြစ်ကုန်ပီ။ တုန်လွိုက်မောဟိုက်နေတဲ့ ၂ယောက်သား နွုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းနေရာကခွါပီး ကျန်နေ တဲ့ကိုယ်ပေါ်က အတွင်းခံတွေကို တုန်တုန်ရီရီချွတ်ချပလိုက်ကြတယ်။ ဘွားကနဲ၊အိကနဲထွက်ကျလာတဲ့ သူ့နို့ဝိုင်းစက်စက်ကြီး၂လုံးကို ကျနော်တပ်မက်စွာငေးနေသလို၊ ဖြောင်းကနဲလေထဲကိုတန်း မတ်စွာထွက်ကျလာတဲ့ အကြောအပြိုင်းပြိုင်း တဆတ်ဆတ်ခါနေတဲ့ ကျနော့် -ီး ကြီးကိုလည်း သူ့မျက်လုံးလေးတွေက ငုံ့ကြည့်ရင်း နွုတ်ခမ်းထူထူလေးကိုလျှာနဲ့သပ်နေပြန်တယ်။ အချိန်သိပ်ဆွဲမနေ တော့ပဲ ပန်းသွေးရောင်ထနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဆွဲစို့ဖို့ကျနော် ရှေ.ကို တိုးအကပ် … ကြာပန်းဖြူရဲ.လွုပ်ရှားမွုကကျနော့်ထက်ပို မြန်ဆန်လွန်းနေရောဗျ။ ခုနက အ၀တ်တွေချွတ်ချရင်း မတ် တပ်ကိုယ်စီရပ်နေရာကနေ သူမကျနော့်ရှေ.မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပီး လေထဲကိုထောင်မတ်နေတဲ့ ကျနော့် -ီး ကိုလက်၂ဖက်နဲ့စုံဖမ်းကိုင်လိုက်ရင်း အားရပါးရသူ့နွုတ်ခမ်း ၂လွာကြားထဲကိုစုပ်ယူ ပလိုက်တော့ နွေးကနဲအရသာနဲ့အတူ ကောင်းလွန်းလို့ ကျနော်ခြေဖျားထောက်ပီးကော့ထားပေးမိတယ်ဗျာ။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အရင်းနားရောက်ခါနီးအထိ ပါးစပ်ထဲ -ီး အစုပ် ခံနေရတော့ ကျနော်လေဟာနယ်ထဲရောက်နေသလိုပဲ။ ဟားးးး ဟားးးးးးး ဆိုပီးအသံထွက်ညည်းနေမိတဲ့အပြင် တချက်တချက်စိတ်က လွတ်လွတ်သွားတော့ ကျနော့်ဆီးစပ်နားက ကြာပန်းဖြူ ရဲ.အုံကောင်းကောင်း ဆံပင်လေးတွေကို တအားဆွဲဆုတ်ကိုင်ပီး မညှာမတာ ဆောင့်သွင်းသွင်းနေမိပီဗျ။ ၅မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်… မိန်းမဆိုတာနဲ့မထိတွေ့တာကြာနေပီဖြစ်တဲ့ ကျနော် ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ပဲ.. တဟင်းဟင်းတရှီးရှီး..ညည်းညူရင်း သူ့ပါးစပ်ထဲမှာ ပီးချင်သလိုလိုဖြစ်လာတော့ သတိရှိရှိအမြန်လေး ကျနော့် -ီး ကိုအတင်းဆွဲထုတ်လိုက်တာ နည်းနည်း တောင်နောက်ကျသွားတော့ ပထမဆုံးအရှိန်ပြင်းပြင်း ပန်းထွက်လာတဲ့ တစ်ချက်မှာ သူ့နဖူးလေးပေါ်ကို ဖတ်ကနဲပန်းမိသွားတယ်။ ဇတ်ကနဲကျနော်ဆွဲထုတ် လိုက်တဲ့ မာတင်းနီရဲနေတဲ့ ကျနော့် -ီး ကိုကြာပန်းက ညာလက်နဲ့ပြောင်းပြန်ကိုင်ပီး အသားကုန် -ွင်း ထုသလိုတဗြောင်းဗြောင်းဆောင့်ပေးနေရင်း ရင်ကလေးကော့လို့ဆက်တိုက် ထွက်ကျလာတဲ့ ကျနော့်သုတ်ရည်ပူပူတွေကို သူ့ ရဲ့ဝါ၀င်းထွားကြိုင်းလှတဲ့ နို့ကြီး၂လုံးပေါ်ကိုဆက်တိုက် ပက်ဖြန်းစေလိုက်တယ်။
ရေပိုက်က အားနဲ့ဆောင့်ထွက်လာတဲ့ ရေတွေလို သူ့နို့တွေပေါ် ကျနော်ပန်းထုတ်လိုက်ရတော့ အင်မတန်ကျေနပ် နှစ်သိမ့်မွုရယ် တစစ်စစ်နေအောင်ကောင်းလွန်းလှတဲ့ကျင်ဆိမ့်ဆိမ့်အရသာရယ်ရောပြွန်းနေတဲ့ခံစားမွုမျိုးကြောင့် ကောင်းလိုက်တာ သူငယ်ချင်းရာ လို့ပါးစပ်က မြည်တမ်းရေရွတ်မိပြန်တယ်။ နွုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ထားတာကလွဲလို့ ဘာမှအလုပ်မခံရသေးတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းမလေးကတော့ တလက်လက်ထနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကျနော့်ကိုမော့ကြည့်ရင်း… ပျော့စိစိပြန်ဖြစ်စ ပြုနေတဲ့ သူ့လက်ထဲကကျနော့် -ီး ကိုလွတ်မပေးသေးပဲ သူ့နို့သီးခေါင်းထိပ်ကလေးတွေနဲ့ ပွတ်ပေးနေသေးတယ်။ ဆောရီးဟာ! လို့ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ သူ့ကိုတောင်းပန်လိုက်ရင်းဆွဲ ထူမလိုက်တော့ မာန်တက်နေပီး ဘာမှအလုပ်မခံရသေးတဲ့ ကြာပန်းက ကျနော့်ရင်အုံနားမျက်နာကပ်လာပီး ကျနော့်နို့သီးခေါင်းကို ငုံခဲသလိုလုပ်ပီး မနာအောင်တဆတ်ဆတ်ကိုက်နေပြန်တယ်။ ၃-၄ချက်လောက်အဲ့လိုလုပ်ပီးမှ အံကြိတ်ထားတဲ့လေသံနဲ့စကားစပြောတယ်။ ဖိုးသက်… နင်ဟာကလဲ.. ဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနဲ့ … ငါစိတ်တအားထနေတာနော်.. ဒီတိုင်းမပြန်ဘူးဒါပဲ.. အာ.. သူငယ်ချင်းလေး.. ငါဘယ်မိန်းမနဲ့မှမအိပ်တာ နှစ်ချီနေပီဟ.. ဘယ်လိုလုပ်ခံနိုင်မှာလဲ.. နင်လုပ်တာကလည်းဒီလောက်ကြမ်းတာ..ဟီးဟီး အမ်! ဘယ်သူကကြမ်းတာလဲဟွန်း.. ငါ့ပါးစပ်ထဲကိုများ သူ့ဟာကြီးနဲ့အသားကုန်ဇွတ်ဆောင့်သွင်းပေးတာ.. လည်ချောင်းထဲထိဝင်တယ်.. နားထဲကလည်းလေတွေတောင်ထွက်တယ်.. ဟိ… ချောဒီး ချောဒီး … ငါစိတ်လွတ်သွားလို့ပါဟာ.. ကဲ.. ငါ့တစ်ကိုယ်လုံးပေကုန်ပီနင့်ဟာတွေကလည်း ထွက်လာတာအများကြီး.. သန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်မယ်..လာလိုက်ခဲ့ အ၀တ်တွေကော..ထားခဲ့မှာလား..ဖင်တုံးလုံးကြီး…ခစ်ခစ်.. လျှာမရှည်နဲ့ …ခုချိန်ဒီအောက်ကိုဘယ်သူမှမလာရဲဘူးဆိုတာ နင်အသိဆုံး.. ငါစိတ်တိုလာပီနော်..လာစမ်း.. ဆိုပီးကျနော့်လက်ကိုဆွဲကိုင်ထားရင်း စတိုခန်းတံခါးကိုဖွင့်ပီး အပြင်လျှောက်လမ်းထဲကိုထွက်လိုက်တယ်။ စတိုခန်းကနေခြေလှမ်း၁၀လှမ်းလောက်လျှောက်လိုက်ရင်လော့ကာတွေပါတဲ့ ဆက်တင်ဆင်တဲ့အလုပ်သမားတွေ အတွက်လုပ်ထားပေးတဲ့ ရေပန်း၁၀ခုလောက်ပါတဲ့ ရေချိုးခန်းထဲရောက်သွားတယ်။ စတုဂံ ပုံစံရေချိုးခန်းထဲရောက်သွားတော့ မီးချောင်းတွေအကုန်ဖွင့် လိုက်တော့ လင်းထိန်သွားတာပဲဗျ။ ကျနော့်လက်ကိုလွတ် လိုက်ပီး နံရံကပ်ရေပန်းကို ဖွင့်ချပီး ကြာပန်းဖြူရေချိုးသန်.စင်နေတာကို ရေချိုးခန်းအလယ်မှာ ရှိတဲ့ အုတ်ခုံလေးပေါ်ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ရင်း ကျနော်ပြုံးရင်းငေးကြည့်နေမိတယ်။ တော်တော်ကို ကိုယ်လုံးလှတဲ့ကောင်မလေးဗျ။ လွုပ်ရှားလိုက်တိုင်း ကျနော့်ကိုကျောပေးထားတော့ ခုနက သတိမထားမိတဲ့ တင်ပါးအိုးအိထွား ထွားကြီးက တုန်ခါနေတာပဲ။
ခါးနေရာလေး ကြတော့ သိမ်ပီးသေးသေးလေးဖြစ်သွားတာ ရယ်၊ ရင်ဘတ်နေရာမှာကြတော့ နို့အကြီးကြီး ၂လုံးက တွဲကျခြင်းလုံးဝမရှိပဲ စူထွက်နေတာဗျ။ အဲ့လို သူ့ကိုထိုင်ငေးနေရင်းနဲ့ကို ကျနော့်မှာ(အဖုတ်ငတ်နေတာကြာခဲ့ပီမိုပလားမသိဘူး) ချက်ချင်းကို အောက်က အငယ်ကောင်ကပြန်ထစပြုလာပြန်ပီဗျို.။ ရေပန်းအောက်မှာ ဆံပင်တွေရေစိုနဲ့ကပိုကရို နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကိုဆပ်ပြာတိုက်ဆေးကြော(ဆပ်ပြာတွေက ဒီအခန်းထဲမှာ ဖာလိုက်ထားပေးထားတယ်) နေရင်းအဲ့ဒီခပ်မိုက်မိုက်သွေးဆူစ ရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ကျနော့် သူငယ်ချင်းမလေးက ကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်ပီး… ဖိုးသက်!! နင်အဲ့ဒီမှာဘာထိုင်လုပ်နေတာလဲ.. ချီးပဲကွာ.. ဆိုပီး ရေပန်းအောက်ကနေမျက်နာတင်းတင်းနဲ့ အော်ဆဲလာမှသတိဝင်လာပီး လာပီလာပီ… အချစ်ကလေး .. လို့နောက်တောက်တောက်ပြန်အော်ရင်း အိထွေးထွေးဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေးကိုပြေးပွေ့ရင်း ရေပန်းကကျနေတဲ့ရေစက်တွေအောက်ကိုတိုးဝင် လိုက်တယ်။ အားးးး… အေးအေးမွေးမွေးလေးပါလားဗျာ။ လင်းထိန်နေတဲ့ မီးရောင်အောက်မှာ ရေစက်တွေနဲ့ စိုလက်နေတဲ့ နို့ကြီးတစ်လုံးကိုဘယ်ဖက်လက်က သူ့ခါးကျင်ကျင်လေးကိုဆွဲဖက် ထားရင်းတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက် လျှာနဲ့အပြားလိုက်လျှက်လိုက်လုပ်ပေးရင်း ညာဖက်လက်ကတော့ ကျန်တဲ့နို့ကြီးတစ်လုံးကို အားရပါးရဆုပ်ချေလိုက်.. နို့သီးခေါင်းစူတူတူကြီးကိုလက်ညှိုးလက်မ ကြားထဲညှပ်ပီးလှိမ့်ပေးလိုက်နဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းဇတ်လမ်းစလိုက်ပြန်ပီ။
ခုမှစပီး ကျနော့်အပြုအစုအယုအယကိုခံရတဲ့ကြာပန်းဖြူလေးကတော့ ကျနော့်ဆံပင်တွေကို လက်၂ဖက်နဲ့ဆွဲကိုင်ရင်းရေ ပန်းက ကျနေတဲ့ရေသံတဖြောက်ဖြောက်ကိုလွမ်းတဲ့အထိ အားးးးး… အားးးးးး..ဆိုတဲ့အသံလေးနဲ့ညည်းစပြုလာတယ်။ ရုတ်တရက်ရေပန်းအောက်ကနေ ကျနော်သူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပီး ခုနက ကျနော်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခဲ့တဲ့ အလယ်က အုတ်ခုံလေးနားကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ သူ့ကိုအုတ်ခုံပေါ်ကိုခြေချပီးထိုင်ခိုင်း လိုက်တယ်။ ကျနော်ကမတ်တပ်ရပ်လျှက်ကနေဒူးထောက်ထိုင်ချ လိုက် ရင်း နို့စို့တာကိုဆက်လုပ်တယ်။ စိတ်တအားထနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကြာပန်းဖြူက လက်၂ဖက်စလုံးနဲ့ သူ့နို့ကြီး၂လုံးစလုံးကိုအောက်ကနေပင့်ပီးမ ထားပေးရင်းတရှီးရှီး ဖီးလ်တက်နေတယ်။ လျှာနဲ့လျှက်တာ မကြိုက်ဘူး… ရှီးးး .. စို့တာ စုပ်တာ ခပ်ပြင်းပြင်းလုပ်ပေးသူငယ်ချင်းလို့ …. သူမတောင်းဆိုလာတော့ ကျနော်လည်းခပ်ပြင်းပြင်းသူ့နို့သီးခေါင်းရှည်ရှည်ပန်းသွေးရောင် လေးတွေကိုစို့ပေးနေရင်းက သူ့အောက်ပိုင်းကိုတိုက်စစ်စဖို့ပြင်တယ်။ ချက်အောက်ဖက်ကို လက်နဲ့တဖြေးဖြေးပွတ်ရင်းဆင်းချသွားတာနဲ့ ခြေဆင်းထားတဲ့ ကြာပန်းက ချက်ချင်းခြေထောက်၂ ချောင်းလုံးကိုဒူးထောင်ပေါင်ကားအနေအထားဖြစ်အောင်နေပေးလိုက်တယ်။ ဟာ.. ဘယ်လောက်တောင် အ -ိုး ခံချင်နေမှန်းမသိဘူးဗျာ။ ရေပန်းအောက်ကခုမှထွက်လာတာတောင်သူ့ အဖုတ် တပြင်လုံးချွဲကျိကျိနဲ့ေ-ာက်ရည်တွေစိမ့်ကျနေတာဗျ။ ကျနော့်လက်ချောင်းတွေက သူ့ အဖုတ်ပြင်ပေါ်မှာ တရွရွကစားရင်းမထိတထိပွတ်လိုက်၊ေ-ာက်စိလေးပေါ်မှာ လက်ညှိုးလက်ခလယ်၂ ချောင်းကို ဘယ်ညာဘယ်ညာဖိလိုက်ဖွလိုက်လုပ်ပေးနေတော့ တရုတ်မလှလှလေးခမျာ ကော့ပြန်လှန်တက်စပြုလာပီး ပါးစပ်ကလည်း ပေါက်ကရတွေညည်းညူပီးဖီးလ်တွေတက်လာတာပေါ့ လေ။ အဲ့လိုလုပ်နေရာကနေ ဆတ်ကနဲအလစ်ချောင်းပီး အပေါ်ကနို့စို့နေတာကို အားနဲ့အစို့… အောက်ကလဲ လက်ခလယ်နဲ့ေ-ာက်ဖုတ်ထဲနွိုက်ပလိုက်တော့.. အာဟာ့… ဆိုတဲ့အော်သံလေးထွက်လာရောဗျ။ ၀ါဝင်းဝင်းနို့ကြီး၂လုံးကိုဘယ်ညာပြောင်းစို့ရင်း အောက်က အဖုတ်ကိုလက်ချောင်းနဲ့မွေ၊အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲတာခံနေရတော့ အသံလုံတဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာ ကြာပန်းဖြူရဲ.ပါးစပ်ကစိတ် လွတ်ကိုယ်လွတ်အော်သံတွေကဆူညံကုန်ပီ။ အဲ့ဒီလိုအဆက်မပြတ်လုပ်ပေးနေရင်းနည်းနည်းကြာလာတော့ ကျနော့်အောက်က ကောင်လေးကလည်းပြန်ထောင်မတ်စပြုပီး တိုက်ပွဲစဖို့အသင့်ပြန် ဖြစ်လာပီမို့ အုတ်ခုံအစွန်းမှာဒူးထောင်ပီးထိုင်နေတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကောင်မလေးကို အုတ်ခုံပေါ်ပက်လက်လှန်အနေထားဖြစ်အောင် တွန်းလှဲချလိုက်တယ်။ ကြမ်းပြင်ကနေ ၂ပေလောက်အမြင့် ရှိတဲ့ အုတ်ခုံလေးပေါ်မှာ ကြာပန်းတစ်ယောက်ပက်လက်ကလေးဖြစ်သွားတော့မှ မီးရောင်အောက်တည့်တည့်မှာ သူ့ေ-ာက်ဖုတ်ကိုသေသေချာချာ ကျနော်အကဲခတ်လိုက်တော့ တံတွေးတွေဂလုဆို မျိုချမိတဲ့အထိရင်တုန်သွားတယ်။
နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ။ ခန္ဓာကိုယ်တင်တောင့်တင်းတာမကဘူး…ေ-ာက်ဖုတ်ကြီးကလည်းအကွဲကြောင်းနေရာလေးတင် ဟက်တက်ကွဲကလေးနီရဲနေပီးဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတော့ ဖောင်းကားပီး မီးကျီးခဲရဲရဲနဲ့ အကင်ခံထားရတဲ့ ရှမ်းခွက်ပုတ်အဖြူဖောင်းကားကားလေးလိုဖြစ်နေရတဲ့ အထဲအရည်ပျစ်ပျစ်တွေက အပြင်ကိုတတောက်တောက်စိမ့်ကျ ထားတော့ တလက်လက်နဲ့မီးရောင်အောက်မှာ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲဗျာ။ အချိန်သိပ်ဆွဲမနေတော့ဘူး… ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ခုနကပြောသလို အားရပါးရမိန်းမနဲ့မတွေ့ရတာကြာတော့ စိတ်အရမ်းလွုပ်ရှားနေပီမဟုတ်လား။ မာတင်းပီးထောင်မတ်မာန်ဖီနေတဲ့ ကျနော့် -ီး ကိုအရင်းက ကိုင်ပီး ကြာပန်းဖြူရဲ.ေ-ာက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းအနှံ့ အချောင်းလိုက် တဖြန်းဖြန်းရိုက်ပီး စိတ်ပိုကြွလာအောင်၎-၅-၁၀ချက်လောက်ခပ်ဆတ် ဆတ်လေးရိုက်ပေးလိုက်တော့ ကျွတ်…ရှီး..ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ… သူငယ်ချင်း… ငါ့ကိုအားရပါးရမြန်မြန်လေး -ိုး ပေးပါတော့ဟာ ဆိုတဲ့တောင်းဆိုသံလေးကြားလိုက်ရတယ်.. အိုကေ..အိုကေ !! လို့ပြောရင်းမတ်တပ်ရပ်လျှက်က ဒူးကိုကွေး၊ ကျနော့် -ီး ကိုသူ့ေ-ာက်ဖုတ်အ၀မှာ နည်းနည်းလေးဝလုံးဝိုင်းသလိုမွေရင်း ဖိထည့်လိုက်ကြည့်တော့ -စ် မြုပ်အောင်ပလွတ်ဆိုဝင်သွားတယ်။ ရှေ. ဆက်မတိုးသေးပဲ ကြာပန်းဖြူရဲ.ခါးကျင်ကျင်လေးကို လက်၂ဖက်နဲ.စုံကိုင်ထားရင်း အကဲခတ်လိုက်တယ်။ သွင်းပလိုက်တော့ဟာ… နင့်ဟာကြီးနဲ.အဆုံးထိဆောင့်ပီး အသားကုန်လုပ်ပလိုက်… ငါ့ဟာထဲမှာရွစိစိဖြစ်နေပီ..မြန်မြန်လုပ်တော့ .. လို့မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားတဲ့သူမအော်တော့မှအားရပါး ရဆောင့် သွင်းပလိုက်တယ်။ ရှီးးးးးးးးးးးးးး … ပြွတ်..ပလွတ်ဆိုပီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းအဆုံးထိဝင်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းဆွဲပြန်ဆွဲထုတ်ပီး အားနဲ့ပြန်ဆောင့်ချလိုက်တော့ ကြာပန်းဆီက အာခေါင်ခြစ်ပီးအော်သံထွက်လာ တယ်။ ကျနော်မရပ်တော့ဘူးဗျာ။ ခုနကမှတစ်ချီပီးထားတာဆိုတော့ ခပ်မြန်မြန်ခပ်ကြမ်းကြမ်း အသားကုန်ခါးကျင်ကျင်လေးကို အားပြုပီး ဆောင့် -ိုးတော့တာပဲ။ ဒီလောက်တောင်အသားကုန် ဆောင့်နေတာတောင်မှာ ကြာပန်းဖြူက အောက်ကနေပြန်ကော့လိုက် ခါးလေးကိုရမ်းပီး မွေထိုးလေးပြန်ထိုးလာလိုက်လုပ်လာပြန်တယ်။
အဲ့ဒီလိုလုပ်လေလေ ကျနော်ကပိုကြမ်းလေပေါ့။ အသံ လွိုဏ်သံတွေထွက်နေတဲ့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရန်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်နေသလားထင်မှတ်မှားရအောင်ကို ၂ယောက်စလုံးရဲ.မာန်သွင်းသံတွေ၊ ကောင်းလွန်းလို့အော်ညည်းသံတွေဆူပွက်နေတော့တာပေါ့လေ။ ဒူးကွေးပီးဆောင့်ရတာအားမရလာတော့လို့ အုတ်ခုံပေါ်ကျနော်တက် ပီးကြာပန်းရဲ. ဒူးခေါက်ကွေး၂ခုကိုသူ့မျက်နာနားရောက် အောင်တွန်းတင်လိုက်တော့ သူ့ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးက အောက်ကအုတ်ခုံနဲ့လွတ်ထွက်သွားတယ်။ ဒူးခေါက်ကွေး၂ခုကိုကျနော့်လက်၂ဖက်နဲ့တွန်းတင်ထားရင်းဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေတဲ့အနေအထား နဲ့ကျနော်ဆောင့်ဆောင့်ချပီး -ိုး နေပြန်တယ်။ ရိုးရိုး -ိုး ဆောင့်တာမဟုတ်ပဲ တစ်ကိုယ်လုံးအားကို -ီး ထိပ်ပို့ပီး လူရော -ီး ပါဆောင့်ဆောင့်ချတာဆိုတော့ နင့်နင့်သီးသီး အားပါးတရရှိလွန်းနေတယ်။ ဟားးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးးး ရတော့မယ်ရတော့မယ်.. ဆိုပီးအောက်က ကြာပန်းတစ်ယောက်တွန့်လိမ်တက်လာပီး ကျနော့်ကိုအတင်းကုတ်တွယ်တက်လာတော့ သူမတစ်ချီပီးသွားမှန်း သိလိုက်တဲ့ကျနော် ဆောင့်ချနေတာကိုရေဘုံဘိုင်နှိပ်သလို တဖန်းဖန်းမြန်မြန်လုပ်ပေးလိုက်တော့ ငြိမ်ကျသွားတယ်။ တွန်းတင်ထားတဲ့သူမရဲ.ခြေထောက်တွေကို ချပေးလိုက်ပီး မျက်လုံးလေးမှိတ် ပီးမှိန်းနေတဲ့ သူ့လည်ပင်းလေးတွေ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာဖျားလေးနဲ့ လျှက်ပေးရင်းကျနော် -ီး ကို ပြန်ဆွဲမထုတ်ပဲ အ၀င်အထွက်ကိုမြန်မြန်လေးလုပ်ရင်းဆက် -ိုး နေလိုက်တယ်။ အသား ကုန်စိတ်မထိန်းပဲ အားကုန်ဆောင့် -ိုးထားတာမိနစ်၂၀လောက်ရှိနေပီဆိုတော့ ကျနော့် -ီး တစ်ချောင်းလုံးလည်းတင်းမာ ပီးပေါက်ကွဲချင်လာပြန်ပီ။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုပုံနဲ့မပီးချင်သေးလို့ရပ်ပီး မျက် လုံးလေးမှိတ်ပီးတစ်ချက်တစ်ချက်တွန့်တွန့်နေရင်း ပီးဆုံးမွုအရသာကိုဇိမ်ခံပီးမှိန်းနေတဲ့ ကြာပန်းကို… သူငယ်ချင်းငါနင့်ရဲ.အရမ်းလှတဲ့ ဖင်တုံးကြီးကိုလေးဖက်ထောက်ပီး အနောက်ကနေဆောင့်ပီး ပီးချင်တယ်ဟာလိုပြောလိုက်တော့… အင်း…နင့်စိတ်ကြိုက်ဆောင့်လို့ရတယ်..ဒါပေမယ့်ပီးခါနီးဆွဲထုတ်ပီး အပြင်မှာသုတ်ရည်တွေထုတ်တာ မလုပ်နဲ့နော်.. ငါကပန်းထုတ်တဲ့အရသာနွေးကနဲနွေးကနဲကိုကြိုက်လို့ ဆိုပီးချက်ချင်းလေးဖက်ထောက်ပေးတယ်။
မီးရောင်အောက်မှာ ဖွေးဆွတ်နေတဲ့ ကြာပန်းဖြူရဲ.တင်ပါးအယ်အယ်ကြီး၂လုံးက ဂျယ်လီတုံးကြီးလိုပဲတုန်ခါတင်းကားနေတယ်။ ချက်ချင်းပဲသူ့အ နောက်မှာဒူးထောက်လိုက်ပီး ဖင်ဖွေးဖွေးကြီး၂ခုကိုလက်မ ၂ခုနဲ.ဆွဲဖြဲပီး သူ့ေ-ာက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်း၂ခုအလယ်က နီရဲရဲအကွဲကြောင်းထဲ ကျနော့် -ီးကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ အ၀င်ချောအောင် အနေအထားမှန်အောင် ခပ်ဆဆလေး၂-၃ချက်လောက် အသွင်းအထုတ်လုပ်ပီးတာနဲ့ ခါးလေးကော့ထားတဲ့ ကြာပန်းဖြူရဲ.ပုခုံးကျော်ရုံအိုမီဂါပုံစံဆံပင်လေးကို ညာလက်နဲ့လှမ်းကိုင်ဆွဲလိုက်တော့ အားးးး ဆိုပီးကော့တက်လာတယ်။ သူငယ်ချင်း ငါနည်းနည်းကြမ်းလို့ရမလားလို့ သူ့ဂုတ်ကလေးကိုဖွဖွကိုက်ရင်း ဘယ်ဖက်လက်က နို့တစ်လုံးကိုဂျိုင်းအောက်ကနေလျှိုပီး ဆွဲဆုတ်ချေရင်းမေးလိုက်တော့.. နင်ကြမ်းလေးငါကြိုက်လေဆိုပီး အံကြိတ်ထားတဲ့လေသံလေးနဲ့ပြန်ဖြေလာရော။ မီးစိမ်းပြလိုက်ပီဆိုတာနဲ့ အကြမ်းတမ်းဆုံး ကျနော့်ဆောင့်ချက်တွေစတော့တာပေါ့။ ဆံပင်ဆွဲနို့ကိုလှမ်းဆွဲရင်း ဖင်တုံးကြီးတွေလွိုင်းထပီး တုန်ခါသွားတဲ့အထိအားနဲ့ဆောင့်။ ပိုပိုပီးအားထည့်လာ အောင်လည်း ကြာပန်းရဲ.ငယ်သံပါအောင် အော်သံလေးတွေက အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာကိုး။ နောက်ဆုံးကျနော်မခံနိုင်လာတော့ လို့ လက်နှစ်ဖက်စလုံးကို တင်ပါး၂ခြမ်းစလုံးကိုပြောင်း ကိုင်ထားပီး တဖန်းဖန်းတဒိုင်းဒိုင်းဆောင့် -ိုး ရင်း သုတ်ရည်ပူပူတွေကို အရမ်းလှပီးအိထွားလှတဲ့ ကြာပန်းဖြူရဲ.ဖင်ကြီးထဲပန်းထုတ်လိုက်တာ ကောင်းလွန်းလို့ ကျနော့်နားထဲကနေ တစီစီမြည်သံ တွေတောင်ထွက်လာတယ်ဗျာ။ လူတစ်ကိုယ်လုံးလဲ ကောင်းလွန်းတာရယ် နာရီဝက်လောက်အားကုန် အဆက်မပြတ် -ိုး လိုက်ရတာရယ်၊ မရတာကြာနေပီဖြစ်တဲ့ကာမအရသာကိုခံစားလိုက်ရ တာရယ်ပေါင်းပီး ကြာပန်းဖြူရဲ.ကျောပေါ်မှောက်လျှက် ထပ်ကျသွားပီးဇိမ်နဲ့မှိန်းနေလိုက်တယ်လေ။ နားထဲက တစီစီမြည်နေသံမပျောက်သေးလို့မှိန်းနေရာက ကျနော်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်ဟာ ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုက လေယဉ်ပေါ်မှာရောက်နေမှန်းသတိ ထားလိုက်မိတယ်။ အိပ်ပျော်သွားပီးအိပ်မက် မက်နေတာကိုးဗျ။ ရန်ကုန်ရောက်ပီးနောက်နေ.မနက်မှာ လေယဉ်လက်မှတ်ရတာနဲ့ ချက်ချင်းထွက်လာတာ။ မန်းလေးလေယဉ်ကမနက်၎နာရီ လောက်ကွင်းချိန်းခေါ်တော့ မနက်ကအိပ်ရေးပျက်ထားတာလေ။ အင်း..ငါ့မှာလည်း ပြန်လာတာ၂ရက်လောက်ရှိသေးတယ်… ခခလေးတွေကို စိတ်စွဲနေမှန်းသိသာနေပီ ခဏလေးအိပ်ပျော် သွားတာတောင် အိပ်မက် မက်မိသေးတယ်။
ဟို၂ကောင် ကြာပန်းဖြူနဲ့မေရီလည်း ငါမရှိတော့ လောလောဆယ် ငတ်ပီပေါ့လို့တွေးရင်း တစ်လနှစ်လစိတ်ပြေလက်ပျောက်အနားယူပီး နင်တို့ဆီ ငါလာတွေ့မှာပါလို့သူတို့ကို ဂတိပေးရင်း၂ယောက်စလုံးကိုဖက်နမ်းခဲ့တာသတိရလို့ တခစ်ခစ်နဲ့တစ်ယောက်ထဲ ရယ်နေမိတယ်။ လေယဉ်ဆိုက်တော့ ပစ္စည်းတွေများလွန်းလို့ ကားစင်းလုံးငှါးလိုက်ရတယ်။ မန်းလေးမြို.ရဲ.လေကိုအားရပါးရရှူလိုက်မိတော့ ကျနော်ဟာအဆမတန်ပြန်လည်နုပျိုသွားသလိုပဲဗျာ။ ကားဆရာကို စီးကရက်တစ်လိပ်ထုတ်တည်လိုက်ရင်း နန်းရှေ.ကိုမောင်းဗျာ… လို့ပြောပီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖီလင်လေးနဲ့ကြည်နူးနေမိတယ် …………ပြီး။